काठमाडौँ । आफुसँग भएको सम्झौता उल्लघंन भएको भन्दै अनसनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थमा जटिलता देखिएको छ ।
मुटुको गति अनियमित भएर स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएपछि उनलाई सोमबार बिहान इलाम अस्पतालमा लगिएको छ ।
डा. केसीको दाहिने फोक्सोमा हावा कम भएर बेला–बेला मुटु तेज धड्किने तथा रोकिने भएकाले अस्पताल लगिएको चिकित्सक रामकृष्ण आचार्यले बताए ।
आचार्यका अनुसार डा. केसीको छातीमा संक्रमण भएको तथा टन्सिलले घाँटी सुन्निएको छ । आइतबार नै गरिएको परीक्षणमा डा. केसीको मुटुको गति अनियमित भइ अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्था आएपनि उनी अस्पताल जान मानेका थिएनन् ।
गत पुस २५ गते संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयक पारित गर्दा आफूसँगको सम्झौता उल्लंघन भएको भन्दै डा. केसीले सोही दिनबाट इलाम सदरमुकामको एक घरमा १६ औ अनसन सुरु गरेका थिए ।